Gbasara anyị - Xingtai Tianzheng Sealing Co., Ltd.
Xingtai Tianzheng akara Co., Ltd.
Xingtai Tianzheng akara Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke roba extrusion ngwaahịa tọrọ ntọala na 2010, na emi odude ke Xingtai obodo, Hebei Province China, nso site na isi Beijing na ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin. Anyị nwere R&D kachasị ike na nke dị elu, ndị ahịa na ndị ọrụ mmepụta, karịa ndị ọrụ 100. Companylọ ọrụ anyị nwere teknụzụ pụrụ iche na akụrụngwa ọkaibe. Enwere ike ịmepụta ọtụtụ ihe gụnyere EPDM, PVC, VITON, NBR, SILICON na ibe sponge. Na ndabere a, anyị nwere ike rụpụta ụzọ srtips, windo ibe, eriri kabara, igwe arụ .A na-eji ngwaahịa ndị isi na ụgbọ ala na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ngwaahịa na-ere ọkụ na gburugburu ụwa.
Xingtai Tianzheng akara Co., Ltd. bụ a sara mbara enterprise na-arụpụta iche iche nke ụgbọala ngwa dị ka ụgbọala, ọgba tum tum, generators, mmanụ ubi, ụgbọ mmiri, injinịa ígwè, wdg The isi ngwaahịa bụ: nile di iche iche nke akara ibe, cylinder gasket. , iyuzucha anwụrụ gasket, mmanụ akara, valvụ mmanụ akara, mmiri akara, overhaul ngwugwu, obere idozi ngwugwu, ọgba tum tum breeki akpụkpọ ụkwụ, ụgbọala, akpa, mwube na mma ihe sealing ibe, iyo, elu voltaji waya, wdg Anyị ụlọ ọrụ jiri mere elu nzukọ akara mmepụta teknụzụ, na-ewebata akụrụngwa nyocha nke ọgbara ọhụrụ, ma guzobe usoro usoro mmepe ngwaahịa ọhụrụ. Dị ka ndị ahịa na-achọ n'oge ọ bụla, anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa ndị na-emeju ndị ahịa n'oge na-adịghị anya. Ngwaahịa site na mmepe na mmepụta na ahịa, enwere usoro njikwa njikwa zuru oke, nke na-eme ka ngwaahịa dị mma. N'ihi na ngwaahịa dịgasị iche iche, àgwà, ezi uche price, ọrụ na ebe, merie ntụkwasị obi nke ndị ahịa, ngwaahịa na-exported ka Southeast Asia, na Middle East, Africa, South America na ọtụtụ mba ndị ọzọ na mpaghara. Ogo bụ ntọala nke ndụ enterprise, aha bụ ntọala nke enterprise development, na ọrụ bụ isi iyi nke enterprise ọganihu. Xingtai Tianzheng akara Co., Ltd. dị njikere ịrụ ọrụ na ndị nwere nghọta n'ụwa niile iji mepụta ọdịnihu ka mma.
A na-ere ngwaahịa anyị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East, Africa, South America na ọtụtụ mba na mpaghara ndị ọzọ n'ihi ngwaahịa anyị zuru oke, mma a pụrụ ịdabere na ya, ọnụahịa ezi uche na ezi ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, ndị ọrụ anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge mbụ.